Laba taleefan oo cusub oo loogu talagalay LG: X Cam iyo X Screen | Androidsis
Toddobaad muhiim u ah suuqa Android oo ay weheliso Congress-ka Dunida Moobaylka bilaabmi doono iyo taxane weyn oo soosaarayaal ah oo soo bandhigi doona boosteejooyinkooda ugu fiican sanadka. Taariikh gaar ah oo aad muhiim u ah sanadkan oo wajiyada la arki doono laba ka mid ah soosaarayaasha isku day inaad joogtid ka hor intaanay dhammaan terminaallada la imaan fikradda go'an ee ah, si aad u siiso khibrad wanaagsan oo Android ah, uma baahnid dhamaadka-sare, laakiin qalabka aan ka badnayn € 100, isticmaalaha wuxuu heli karaa wax walba oo la doonayo waa kamarad wanaagsan, processor kaas oo u oggolaanaya furitaanka shabakadaha bulshada dhibaato la'aan iyo shaashad leh qaraar ku habboon 1080p.
Hadda waa LG in, dhowr maalmood ka dib MWC, ay soo bandhigtay labadeeda sharad ee cusub ee bartamaha, LG X Cam iyo X Screen. Laba taleefan cusub oo kala duwan kuwaas oo leh isku qiimo iibin laakiin leh ujeedooyin kala duwan sida magacyadooda kaladuwan ay muujinayaan. X Cam waxay leedahay sababteeda ay u tahay waxa ay tahay sawir qaadashada tanina badanaa sababta oo ah waxay dhabarka ku leedahay laba kamaradood oo mid ka mid ah yahay 13 MP midna 5MP. X Shaashadu waxay ku saleysan tahay haysashada shaashad labaad oo ah 520 x 80 xalka taasna waxay lahaan doontaa tayada awood u lahaanshaha in la bixiyo jaleec fudud oo dhakhso leh si loo arko ogeysiisyada ku soo dhacaya taleefanka iyo haddii aan dhab ahaantii u jeesanno kan ugu weyn.
Qalab si gaar ah loogu tala galay sawir qaadista sida magaceedu tilmaamayo oo ka duwan LG K10 cusub ee dhinacan gaarka ah. Tani badanaa waxay sabab u tahay haysashada laba kamaradood oo gadaal leh 13 MP iyo mid kale oo 5 megapixel sensor ah. Dhinaca hore waxaan ka helaynaa kamarad 8 MP ah, taas oo, marka la soo koobo, taleefankan lagu dhigo mid gaar ah oo loogu talagalay sawiradaas moodada ah. The Combo laba kamaradood Waa la isticmaalay oo la muujiyey ka hor si loogu daro saamaynta qaarkood tayada sawirka.
Waxyaabaha ugu caansan ee ku jira qalabka taleefankan waxaan ka helnay a Qalabka octa-core wuxuu ku xiran yahay 1.14 GHz kuwaas oo aynaan garanayn astaantiisa iyo moodeelkeeda, 2 GB RAM iyo 16 GB oo keyd ah oo gudaha ah. Shaashadda 5,2-inji waxay leedahay xal HD 1080p buuxa. Batariga wuxuu gaaraa ilaa 2.520 Mah oo wuxuu bixiyaa taageero LTE. Waxay leedahay afar nooc oo midab ah: Titanium silver, white, gold iyo pink.
In kasta oo qofku si fudud ugu fakari karo inaan wajaheyno terminal fiiro gaar ah u leh shaashadda weyn, xaqiiqdii isagu wuu saxan yahay, laakiin maahan tayada, laakiin la soco dugsi sare. Dugsiga sare wuxuu mas'uul ka noqon doonaa inuu na soo ogeysiiyo haddii aan ogeysiisyo haysanno iyo haddii aan u baahan nahay inaan shidno midka ugu weyn.
Waxaan wajaheynaa a telefoon yar oo leh shaashad 4,3 inji ah oo leh xallinta HD. Shaashadda labaad ayaa ah tan qayb ka qaadata jacaylka ku jira qalabka si ay ugu soo bandhigaan taleefan ka duwan kan kale ee LG oo xallinaya 520 x 80 LCD. Soo jeedin xiiso leh oo ay soosaartay LG si ay ugu calaamadeyso aaladdan mid ka duwan kuwa kale taasna waxay il gaar ah ku yeelan doontaa dadka isticmaala ee doonaya inay yeeshaan guddi sare halkii laga heli lahaa muuqaalo sawir-qaadasho badan leh sida X Cam.
Inta soo hartay qeexitaanada, X shaashadda ayaa ka yar X cam dhinacyada qaarkood. Processor-ku waa afar-geesle 1.2 GHz, in kasta oo uu leeyahay 2 GB oo RAM ah. Waxay leedahay kaliya kamarad gadaal ah 13 MP, in kasta oo dhanka hore ay wali leedahay 8 MP. Keydinta gudaha waa 16GB batteriguna xoogaa wuu ka hooseeyaa 2.300 Mah. Saddex ikhtiyaar oo midab leh: madow, caddaan iyo dahab kacay.
Labada terminaal ayaa yeelan doona Android 6.0 Marshmallow waxbana kama ogin wax ku saabsan awooddiisa microSD. Waxaa laga heli doonaa suuqyada muhiimka ah ee Aasiya, Yurub iyo Latin America bisha soo socota. Waxaan haysan doonnaa dhammaan macluumaadka loogu talagalay Congress-ka Dunida Moobaylka maalmo yar gudahood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » LG wuxuu muujiyaa LG X Cam iyo X Screen ka hor MWC